Dia mankany Paris, inona no ho hitanao ao an-tanàna | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | tanàna, Paris, Inona no ho hita, Tsangatsangana
La tanànan'ny fitiavana, parisToerana iray nofinofisin'ny tsirairay ny hitsidika farafahakeliny indray mandeha amin'ny fiainany. Toerana feno tantara, ary misy tranombakoka, tsangambato, valan-javaboary ary toerana tsy tokony halahelo amin'ny toe-javatra rehetra. Toy ny amin'ny dia hafa rehetra, dia tsy maintsy mandamina ny tenantsika isika ary manaova lisitr'ireo zava-dehibe rehetra hita.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo isika zavatra tsy tokony halahelo olona raha mankany Paris ianao, ary tanàna iray misy zavatra betsaka hatolotra izy ity, ka ny faran'ny herinandro iray dia mety hahita ireo toerana manan-danja indrindra fotsiny. Raha io no halehanao manaraka, dia raiso ny zava-dehibe indrindra.
1 Manomana ny dia
5 Museum an'i Louvre
6 Fitsidihana hafa mahaliana
Manomana ny dia
Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy raisintsika alohan'ny handehanany na aiza na aiza dia ny fomba hitodihantsika. Avy amin'ny seranam-piaramanidina ianao dia afaka mandray bus na taxi. Ny fivezivezena ny tanàna haingana indrindra dia tsy isalasalana fa ny metro, ary ny tsy maintsy azontsika dia ilay Karatra Paris Visite, izay no tsara indrindra amin'ny fijanonana fohy izay ampiasana be ny fitateram-bahoaka. Ny Passe Navigo no ampiasain'ny Parisianina, noho izany dia ampirisihina mandritra ny fotoana maharitra fotsiny.
Na dia taorian'ny nananganana azy ho fampirantiana an'izao tontolo izao aza dia noheverina fa handrava azy, ny Eiffel Tower no tandindon'i Paris ankehitriny. Nampiasaina ho antena izy io nandritra ny ady ary mandray mpitsidika maherin'ny fito tapitrisa. Ny iray amin'ireo zavatra tsy maintsy jerena dia ity tsangambato ity, izay tsy maintsy hiakaranao hankafizanao ny fomba fijerin'ny tanàna. Ny tena normal dia ny miakatra amin'ny ascenseur, na dia azo atao amin'ny tohatra aza. Na izany aza, misy dingana mihoatra ny XNUMX, noho izany dia tokony hanana endrika tsara isika. Mba hidirana amin'ny tapany farany amin'ny tilikambo dia voatery ny fampiasana ny ascenseur. Torohevitra tsara dia ny maka ny tapakila mialoha hialana amin'ny tsipika lava.
Iray amin'ireo katedraly gothika taloha indrindra eto an-tany, natsangana teo anelanelan'ny taonjato faha-14 sy faha-30 ary ny fitsidihana izay azo antoka fa tsy maintsy ilaina rehefa tonga any Paris. Ny tokony ho fantatsika dia misy fitsangatsanganana misy fitarihana amin'ny teny espaniola isaky ny asabotsy amin'ny XNUMX ora sy sasany hariva, mba hahafahantsika manandrana mifandrimbona mankafy ilay traikefa ary hahafantatra bebe kokoa momba ity katedraly Gothic ity. Azonao atao koa ny mianika ny tilikambo mba hanana fomba fijery hafa tsy mampino momba ny tanàna.
Ity dia iray amin'ireo tsangambato solontenan'ny Paris indrindra miaraka amin'ireo taloha. Rehefa tonga isika dia ho hitantsika fa toy ny lalana boribory lehibe izay andehanan'ny fiara an-jatony izany. Miaraka amin'ny dimampolo metatra ny halavany, ny fanamboarana azy dia nasain'i Napoleon rehefa vita ny adin'i Austerlitz. Eo am-pototry ny Fasan'ny Miaramila tsy fantatra, miaraka amin'ny lelafo mirehitra ho an'ireo miaramila frantsay maty tamin'ny ady ary tsy fantatra. Azonao atao ny miditra ao anatiny mba hankafizanao ny fomba fijery avy any ambony, ary ny ahatongavana any dia tsara indrindra ny mampiasa ny any ambanin'ny ambany, satria mampidi-doza ho an'ny mpandalo izany.
Museum an'i Louvre
Ity dia iray amin'ireo fitsidihana tena ilaina any Paris, indrindra raha mpankafy kanto ianao. Notokanana tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy io ary nanomboka teo dia tsy nitsahatra nahazo fitsidihana izy ity iray amin'ireo malaza eran-tany. Tamin'ny 1989 no nananganana ilay piramida fitaratra goavambe, izay ankehitriny no sary mampiavaka azy indrindra, ary manome azy endrika maoderina kokoa, ary ankehitriny no fidirana mankany amin'ny tranombakoka. Ny sasany amin'ireo sangan'asany manan-danja indrindra dia ny sary hosodoko an'ny Mona Lisa nataon'i Leonardo da Vinci na an'i Liberty mitarika ny olona amin'ny alàlan'ny Delacroix, ary amin'ny sary sokitra dia manana ny Venus de Milo avy any Gresy fahizay na ilay mpanora-dalàna mipetraka any Egypta taloha.
Fitsidihana hafa mahaliana
Ny fitsidihana teo aloha dia tena tsy maintsy ilaina, saingy misy toerana maro hafa izay mety hahaliana tokoa raha manam-potoana isika. Toy ny ohatra ny Pantheon any Paris, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay aingam-panahy avy amin'ny maritrano grika ary manaitra ny ao anatiny, miaraka amin'ny dome lehibe na ny crypt misy fasan'ny olona malaza toa an'i Voltaire na Victor Hugo.
La The Holy Holy Basilica Any an-tampon'ny Montmartre no misy azy, ary na ny fahitana azy na ny hakanton'ilay trano dia mendrika ny fandehanana any. Azonao atao ihany koa ny miakatra any amin'ny faritra avo indrindra hahitany an'i Paris, ary ny hahatongavanao amin'ny basilica dia tsara kokoa ny mitondra ny funicular any, raha tsy izany dia mila miakatra dingana maro isika handehanana any.
Tsy azontsika atao koa ny miala ao Lapan'i Versailles, ny trano misy ny mpanjaka, miaraka amina maritrano tsy mampino, ao anaty mirenty sy zaridaina mahafinaritra. Tsy ao afovoan'i Paris fa mendrika ny fitsidihanao, noho izany dia tsy maintsy atao mialoha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Fitsangatsanganana any Paris, inona no ho hitanao ao an-tanàna
Ny morontsiraka tsara indrindra amin'ny Ranomasina Mainty any Romania